Maxaa keenay in madaxweyne Farmaajo ka laabto go’aankii muddo kororsiga? (AQRISO) – Soomaali 24 Media Network
Maxaa keenay in madaxweyne Farmaajo ka laabto go’aankii muddo kororsiga? (AQRISO)
Posted on April 27, 2021 Leave a Comment on Maxaa keenay in madaxweyne Farmaajo ka laabto go’aankii muddo kororsiga? (AQRISO)
Ayadoo maanta ay go’aano lama filaan ah soo soo saareen hoggaamiyeyaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle isla markaana uu taageeray Ra’iisul wasaare Rooble ayaa waxaa caawa shacabka Soomaaliyeed la hadlay Madaxweyne.
Qodbada madaxweynaha oo dheereed ayuu kaga hadlay arrimo badan waxayna u dhigneed sidaan:
“Waxaan doonayaa in aan caawa halkan kala hadlo shacabka Soomaaliyeed oo runtii walaac xooggan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka Dalka.
Sida aan marar badan u caddaynay, waxaan diyaar u ahayn in dalkan doorasho ka dhacdo, wakhtigeedana ku dhacdo, si nabdoonna u dhacdo. Balse nasiib darro, waxaa caqabad ku ahaa dad gaar ah iyo dowlado shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalkan fawdo la geliyo, burbur iyo kala qeybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah.
Annagu ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan diyaar u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn, oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii horey loo gaaray ee 17-ka Sebteembar 2020, iyo tala-bixintii guddiyada farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo, 16-kii Febraayo 2021.
Waxaan bogaadinayaa dadaalladii nabadda ee Ra’iisul Wasaaraha iyo Madaxweyneyaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, anigoo soo dhoweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka.
Haddaba, si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan xusnay, waxaan ugu horreyn ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasillooni darro, oo ay ka mid tahay siyaasadaynta arrimaha ciidammada, kala-qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha.
Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh,
Waxaa marag ma doonto ah inaad mar walba garab taagnaydeen, welina garab taagan tihiin dowladnimada Soomaaliya. Waxaad muujiseen dulqaad, bisayl iyo dal jacayl.
Waxaa markii la i doortay aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaas taariikhiga ah u garab istaagtaan, waxaad mudan tihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkaas waddaninnimo ee aad muujiseen.
Run ahaantii, marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax hor leh. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada abaabulaya xasillooni darrada oo ay kamid yihiin siyaasiyiin shalay xilal u soo qabtay Qaranka, maantana doonaya in ay fowdo kursiga ku fuulaan inay ka waantoobaan falalkaas.
Maalmihii la soo dhaafay waxay astaan cad u ahaayeen sharka iyo kheyrka. Waxa loo qeybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aannu noqon lahayn barakiciyeyaal waxaan doorannay in aannu noqonno badbaadiyeyaal.
Danaha siyaasaddu waay dhammaanayaan, waxaase waaraya ciidda iyo calanka, ayagaana mudnaan ka leh waxyaabaha kale ee aan isku hayno. Waxaan garawsannay inaan ka hortagno hagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasilloonida iyo nabadda.
Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruq ku bixinaya sidii ay u minjo-xaabin lahaayeen horumarka Soomaaliya si ay uga helaan dano u gaar ah oo aan gaashaanka ku dhufannay.
Waxaannu diidnay in dhallinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogaanayaan cidda ka shaqeynaysa inaysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qarannimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marag kici doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhallinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan in xukunka lagu la kala wareego sanaadiiqda codbixinta.
Maadaama aan ahay ilaaliyaha Dastuurka, ayna waajib tahay inaan isu dheellitiro heshiiska siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyay ee Golaha Shacabku meel mariyeen, waxaan maalinta Khamiista ah hortagayaa Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay ku heshiiyeen Madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay aaminsanayd, welina ay xal u aragtaa in waddada keliya ee furan ay tahay midda wadahadalka, is-qancinta, isu-tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka, iyada oo la dhammaystirayo heshiiskii 17-ka Sebteembar iyo tala-bixintii guddiga farsamada ee Baydhabo.
Waxaan dhammaan saxiixayaasha heshiiskii 17-ka Sebteembar ugu baaqayaa in si degdeg ah la isugu yimaaddo si looga wadahadlo hirgelinta heshiiskaas iyada oo aan wax shuruud ah lagu xirayn.
Ugu dambeyntii, Waxaan farayaa hay’adaha amniga inay ilaaliyaan xasilloonida Caasimadda iyo bedqabka shacabka birimageydada ah, lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni, shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaas ku garab siiyaan Ciidammada Qalabka Sida”.
HALKAAN HOOSE KA DAAWO MUUQAALKA QODBADA
Ku xidhnow Soomaali 24 Media Network (Warbaahin xog ogaal ah)
← XOG, Qodobbo xasaasi ah oo looga wada hadlay Kulan dhexmaray midawga musharaxiinta iyo Beesha caalamka (AQRISO).
WARBIXIN, Madaxweyne Farmaajo wax tanaasul ah ma sameeyay? (AQRISO) →